YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 12
global signature campaign for the release of Burma’s political prisoners has been launched today, on Burma’s Human Rights Day. The campaign aims to collect 888,888 signatures before 24 May 2009, the legal date that Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi should be released from house arrest. Over 150 Burma exile and solidarity groups are participating in the campaign. Events and activities will take place around the world, including in Bangkok, Chiang Mai, London, Dublin, New Delhi, Hong Kong, Manila, Seoul, Jakarta, Sydney, and Tokyo.
The global signature campaign will run from 13 March to 24 May.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/12/20090အကြံပြုခြင်း
ဂျိူးကပ်ဟ ဂျိူးကပ်ဟ။ ။
မော်လမြိုင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ မီးရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုကို နအဖကကြောက်သွားပုံရတယ်။ အခုရန်ကုန်မြို့ မှာ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ညက စပြီး အလုံ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ သာကေတ မြို့ တွေမှာရှိတဲ့ ဓါတ်အားပေးရုံးတွေကို ရဲ လုံထိမ်း တွေအစောင့်ချလိုက်တယ်လို့ သတင်းရတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ လည်ကောင်၊ မြို့ သစ်တွေနဲ့ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက် တွေမှာသာ မီးမလာတာ နအဖ တွေ ဆောက်ထားတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာတော့ မီးတွေ ထိန်ထိန်သာအောင်လာနေတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီရပ်ကွက်တွေမှာ လူတွေသိပ်မနေဘူး အစောင့်တွေပဲရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီရပ်ကွက်တွေမှာနေတာက နအဖ နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့လူချမ်းသာတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ က နိင်ငံခြားတွေမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ကျောင်းသားတဦးက ခုလိုရင်ဖွင့်သွားပါတယ်။
ဘယ်မှာမီးလာနေသလဲဆိုရင်သာကေတ တောင်ဒဂုံ ရတနာ..အိမ်ယာ..ဆိုတဲ့...ရာထူးကြီးကြီး..လူတွေကိုပေးထားတဲ့..အိမ်ယာမှာပေါ့..။ ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အဲဒီက နေရာတွေကို သွားချရမှာ အဲ့ဒီနေရာမှာ..ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေဆိုကောင်းမှကောင်း...၊ဒီကောင်တွေ...ရာထူး..လက်ရှိ..အချိန်မှာ..ရသမျှ..ခိုးပြီး၊အိမ်တေါကို..ရှယ်ဆောက်ထားတာ...။အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာလူမနေဘူး၊ အိမ်စောင့်ခြံစောင့်တွေလောက်ပဲရှိတာ။မာကျူရီမီးတွေနဲ့ ..ထိန်နေတာပဲ.။
အမေရိကန်တွေ စီးပွားပျက်နေကြပုံ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
ဆောင်းပါးတွေ အရှိန်နဲ့ရေးတတ်တဲ့ သန်းစိုးလှိုင်က မြန်မာပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေတို့ ဘာတို့ကို ရေးတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ အမေရိကားကလူတွေ လက်တွေ့မှာ စီးပွားပျက်ကပ်ထဲ ဘယ်လိုကူးခတ်နေလဲ ဆိုတာကို ရေးဦးလေ … တဲ့။ ပြည်တွင်းက စာဖတ်သူတွေက ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုများ စီးပွားပျက်နေကြသလဲဆိုတာ သိချင်တယ်တဲ့။ တဆိတ်ရှိ ခင်ဗျားတို့ဘ၀တွေက ဘ၀ပျက်နေတာတောင် ပင်လယ်ကမ်း သောင်ခြေမှာ အုန်းရည်စုတ်ရင်း ဂီတာတီးပြီး ငိုကြတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲများလား လို့ မေးကြလွန်းလို့ပါ တဲ့။
အမေရိကားက သေဌေးတွေက စီးပွားပျက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်။ စိတ်ကယောက်ကယက်တွေက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး မြင်မြင်ရာ သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ အရင်းရှင်ကြီးတွေက အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ဖြုတ်တယ်။ အလုပ်ပြုတ်တဲ့လူတွေက အစိုးရဆီက အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်တောင်းကြတယ်။ အစိုးရက စီးပွားရေး အားတိုးဆေးဖော်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်တိုက်တယ်။ ဒါကတော့ သတင်းစာတွေထဲက ထင်ရှားတာတွေကို မြန်မြန် သရုပ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် စီးပွား ဘာလို့ ပျက်သလဲ
စစ်တိုက်လို့ လို့ တချို့ကပြောတယ်။ စစ်သုံးစာရိတ်က မနည်းဘူး။ စစ်ပစ္စည်းဖိုးအပြင် စစ်သား၊ အရန်စစ်သား၊ စစ်ပြန်၊ မိသားစု စတာတွေရဲ့ လစာတွေ၊ အထောက်အပံ့တွေက မနည်းဘူး။
ပြီးတော့ အိမ်ဈေးတွေ မတရားဖောင်းပွလွန်းလို့ အိမ်ခြံမြေ ပူပေါင်းကြီး ပေါက်သွားလို့ တဲ့။ အိမ်တွေက ဈေးတွေတင်၊ ပြီးတော့ မတတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုတွေကို အတင်း ထိုးရောင်း၊ အတိုးနှုန်း မတန်မဆနဲ့ ငွေချေးစာချုပ်တွေနဲ့ သူတို့ကို အတင်းညှစ်ထုတ်။ အဲဒီမှာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ပျက်တာပဲ။
ဘဏ်တွေ ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်စားလို့တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ လူတွေကို ငွေချေးပြီးတော့ အဲဒီချေးငွေတွေကို စတော့တွေ၊ ရှယ်ယာတွေအဖြစ် ပုံပြောင်း၊ အချင်းချင်း ပြန်လှည့်ရောင်း၊ အဆိပ်အတောက်ရှိတဲ့ ချေးငွေအရင်းအနှီးပေါ့ဗျာ။ အတိုးများများရမယ် ဘာညာပေါ့။ ၀ယ်ရောင်းတွေနဲ့ ရှုပ်နေချိန်မှာ အိမ်ဝယ်ထားသူတွေက မတတ်နိုင်တော့ အိမ်တွေကို အရှုံးခံပြီး လက်လွှတ်တော့ သူတို့စတော့တွေ ရှယ်ယာတွေ ပြုတ်ကျ။
အာမခံလုပ်ငန်းတွေ ပြုတ်ကုန်လို့တဲ့။ ငွေကြေးနဲ့ အရင်းအနှီးဈေးကွက်မှာ အရှုံးကို ကာမိအောင် အာမခံထားကြတော့ အဲဒီအရှုံးတွေကို အာမခံကုမ္မဏီတွေက ၀င်ခံပေးကြရတော့ သူတို့တွေရှုံးတော့ မလျော်နိုင်၊ အာမခံကုမ္မဏီကို အာမခံထားတဲ့ ကုမ္မဏီတွေပါ ထိခိုက်ကုန်ကြတာပေါ့။
ဒါတွေက မြင်သာတဲ့ အကြောင်းတွေကို တိုတိုတင်ပြတာပါ။ တချို့တွေက အမေရိကားမှာ ဘာမှ မထုတ်လုပ်တော့ဘူး။ အီးကုံးစက္ကူက အစ မိတ်အင်ချိုင်းနား ဖြစ်နေတော့ အဲဒါကလည်း ပြည်သူတွေကို အလုပ်အကိုင် အရင်းအနှီး ပြည်တွင်းမှာ ရှားပါးစေတယ်တဲ့။ အော် … အိမ်သာကမုတ်ကြီးတွေကတော့ မိတ်အင် ယူအက်အေတွေချည်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လေးကလေးနဲ့။ ဒို့မြန်မာတွေ အိမ်ပြန်လက်ဆောင် မိတ်အင်ယူအက်စ်အေ ရှိသေးတဲ့အကြောင်း။ ပြီးတော့ စွမ်းအင်နဲ့ လောင်စာမှာ ပြည်ပကို အားကိုးလာရတာ။ ရေနံကို မှီခိုလွန်းတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အပြောပဲရှိပြီး အလုပ်နဲ့ စံမပြနိုင်တော့။ ကဲ တိုတိုပြောကြပါစို့။ သူတို့ အမေရိကန်တွေ စီးပွားပျက်ကုန်ကြတယ် ဆိုကြပါစို့။ အသုံးကကြီးတော့ အကြွေးပဲရှိတယ်။ စုဆောင်းထားတာလည်း မရှိဘူးတဲ့။ တရုတ်ပြည်ကြီးနဲ့ အာရှသားတွေဆီမှာ အရင်းအနှီးတွေ ပြောင်းရွှေ့ကုန်တယ်တဲ့။
တဦးချင်းဆီ စီးပွားပျက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ
အလုပ်ပြုတ်တာက အဓိကပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြုတ်ရင် သူတို့မှာ လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ငွေကို အစိုးရဆီမှာ ၆ လကနေ ၁ နှစ် အထိ လျောက်ထားခံစားနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အမေရိကန်က အလုပ်သမားတဦးမှာ လစဉ်လစာထဲကနေ ပင်စင်၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အစိုးရအခွန်နဲ့ ပြည်နယ်အခွန်တွေကို ကောက်ယူ သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီက လူမှုဖူလုံရေး (Social Security) နှင့် ကျန်းမာရေး (Medicare) က ရှေ့ကသွားနှင့်တဲ့ အနားယူသွားကြတဲ့ လူအိုတွေ၊ လူနာတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်စင်ကတော့ သင့်စုငွေဖြစ်ပြီး ပင်စင်သွားရင် အတိုးနဲ့တကွ ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပင်စင်စုငွေ (Retirement, 401 (K)) ကို သင့်ရွေးချယ်ရာ ဘဏ်၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေက ထိန်းသိမ်းပြီး စတော့တွေ၊ ရှယ်ယာတွေမှာ မြုတ်နှံတိုးပွားအောင် စီမံပေးနေတယ် (လို့ ဆိုပါတယ်။)။ ကျန်းမာရေးအာမခံ (Medical Insurance) ကတော့ သင်နဲ့ သင့်မိသားစု ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနဲ့ ဆေးစာရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (Federal & State Tax) အခွန်တွေကတော့ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်နယ်က သိမ်းယူပြီး သူတို့ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးပါတယ်။
သည်တော့ အခွန်ပုံမှန်ဆောင်တဲ့ လူတဦးက အစိုးရဆီက ပြည်နယ်ဆီက သူရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖြစ် (Unemployment Benefit) အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်ကို ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပထမ ၆ လကနေ ဒုတိယ ၆ လ အထိ ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ တနှစ်အတွင်း အလုပ်ပြန်ရှာခွင့်ရတယ် လို့ ဆိုရမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်နယ်တခုနှင့်တခုတော့ မတူဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲဒီ အလုပ်သမားဖူလုံရေးဌာနက ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း အလုပ်ရှာတာ၊ သင်တန်းလေး ဘာလေး တက်တာတွေကို လုပ်ပြနေရမှ ထောက်ပံ့ကြေးက ၀င်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ချေးထားတဲ့ ငွေကြေးတွေ အားလုံးကို ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဆိုင်းသင့်တာ ဆိုင်း၊ လျော့ချသင့်တာ လျော့၊ လျော်သင့်တာ လျော်လို့ ရတယ်လို့လည်း ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ထို့အတွက် အဲဒီ ကူညီတဲ့ အေဂျင်စီတွေကို အားမနာတမ်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း အကူအညီတောင်းဖို့သာ လိုတာပါတဲ့။
အမေရိကန်က လစာနဲ့ မြန်မာပြည်က လစာ မတူတာက အဲဒီနေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ငွေ ၁ ထောင် ၀င်ရင် အိမ်ကို ငွေ ၇၀၀ လောက်နဲ့ ပြန်ပါတယ်။ ငွေ ၃၀၀ ကို အစိုးရ၊ အနာဂတ်နဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းတို့က ဖြတ်ယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေ ၃၀၀ လောက်က အိမ်စာရိတ် ဖြစ်သွားတတ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၃၀၀ နဲ့ သွားလာ၊ စားသောက်၊ ပျော်ရွှင်တာ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အကြွေးကဒ်တွေနဲ့ ကြိုသုံးတာကိုလည်း လစဉ် ဆပ်နေပါသေးသတဲ့။ အဲ မြန်မာပြည်ကတော့ လစာ ၁၀၀၀ ရရင် အလုပ်သွားတဲ့ ဘတ်စကားခက ၃၀၀ လောက် ဖြစ်ပြီး၊ စားသောက်စာရိတ်က ၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂၀၀ က ဖယောင်းတိုင်နဲ့ မီးစက်ဓာတ်ဆီဖိုး ဖြစ်ပြီး အိမ်ကတော့ အဖေ၊ အမေနဲ့ ယောက္ခမအိမ်မှာ ကပ်နေလို့ မကုန်ပါဘူးတဲ့။ အင်း အဲလိုမဟုတ်ရင်လည်း “အခြားဝင်ငွေ”နဲ့ ဖြေရှင်းရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
အမေရိကန်တွေ တဦးချင်းစီ တမိသားစုချင်းစီ အလုပ်ပြုတ်ကြလို့၊ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျကြတဲ့ဆီမှာ သူတို့တွေ ဘ၀ပျက်ကြရတယ် ဆိုတာက ခုနင်က အထက်ကပြောသလို မလိုအပ်ပဲ အလွန်ဖောင်းပွထားတဲ့ အိမ်ကို အကြွေးနဲ့ ၀ယ်မိထားတာ၊ မော်တော်ကားအကြွေး ၂ စီး ၃ စီး လောက် ပိနေတာ။ သားသမီးတွေက တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းစာရိတ်တွေ ပိနေတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်လို့ တချို့က ဆိုကြပါတယ်။ အခြားအသုံးစာရိတ်တွေ ပိနေတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ပြီးတော့ အိုစာမင်းစာအတွက် ၀ယ်ယူ စုဆောင်းထားတဲ့ အသက်အာမခံတို့၊ စတော့တို့ ရှယ်ယာတို့၊ ရင်းနှီးတာတွေ ဈေးပြုတ်ကျကုန်လို့၊ အဲဒီအေးဂျင့်တွေ ကုမ္မဏီတွေ စီးပွားပျက်ကုန်လို့ဆိုရင်တော့ တပူပေါ် နှစ်ပူ ဆင့်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ စုထားသမျှတွေ အရေးပေါ်ထုတ်သုံးဖို့အတွက် မကျန်တော့ရင်တော့ ဒုက္ခပေါ့။ ပြန်စစ်ကြည့်ကြပါဦးဗျို့။
အလုပ်ရှင်ကလည်း လုပ်ငန်းအရှုံးပြနေချိန်၊ သို့မဟုတ် မပြုတ်ခင်မှာ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ဖြုတ်တော့တာပါပဲ။ (ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး အားတိုးဆေးမြီတိုကြီးကို မပြောသေးပါဘူး)။ အလုပ်သမားတွေ မိသားစုတွေကလည်း အလုပ်မပြုတ်ခင်နဲ့ အလုပ်ပြုတ်ချိန်မှာ အသုံးစာရိတ်တွေကို အကြီးအကျယ် လျော့ချလိုက်တော့တာပါပဲ။ စိစစ်ချွေတာလိုက်တော့တာပါပဲ။ အဲသည်မှာ လုပ်ငန်းတွေလည်း ၀င်ငွေတွေ ကျဆင်းကုန်ပြီး အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြလို့ လုပ်ငန်းတွေ ပြုတ်ကုန်ကြတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်ကလည်း အခွန်ဝင်ငွေတွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတော့ အခွန်တိုးတာ၊ သူတို့ရဲ့ ပညာရေး၊ အစိုးရ အဆောက်အအုံစာရိတ်တွေကို လျော့ချတော့တာပါပဲ။ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ။ စီးပွားက ပျက်သထက်ပျက်၊ ညဉ့်နက်ထက် နက်ကုန်ပြီပေါ့။
တကယ်ကတော့ စီးပွားရေး ကျမ်းဂန်များအဆိုအရ စာရိတ်တွေ အသုံးတွေ ဈေးနှုန်းတွေ အကြီးအကျယ် ဖောင်းပွ မြင့်တက်နေလို့ စီးပွားရေးကျလာပြီဆိုရင်ဖြင့် အဲသည် ဈေးနှုန်းတွေလည်း ကျဆင်းဖို့ အချိန်ကို ရောက်လာရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၄ သိန်းတန် လုပ်ငန်းက ၄ ထောင်တန် အလုပ်သမားကို ဖြုတ်လိုက်ပေမယ့် သူ့ရောင်းနေတဲ့ ပစ္စည်းကို တခု ၄၀၀ ကနေ မလျော့သေးပဲ ဆက်ရောင်းနေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက တရားတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သူ့ ၄၀၀ တန် ပစ္စည်းကိုလည်း ၃၀၀ လောက်နဲ့ ချရောင်းဖို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမှာပါတဲ့။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းစာရိတ်လည်း ကျ၊ သူ့ပစ္စည်းဈေးလည်း ကျပြီး ကျဈေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ဝယ်လာနိုင်တဲ့ ဦးမော့မှု ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မြန်မာပြည်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က လဘက်ရည် ၁ ခွက် ၁ ကျပ်က အခု ၂၀၀ လောက် အဖြစ် မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း မြင့်တက်လျက် ရှိပါတယ်။ လစာကတော့ တိုးလာတယ် မရှိ၊ တန့်နေတာများပါတယ်။ မတိုးရဲဘူးတဲ့ လစာတိုးသံကြားရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဈေးတွေ တင်လွန်းလို့တဲ့။ ဖြစ်ပုံ။
ခုချိန်မှာတော့ စားသုံးသူတွေက သူတို့ရဲ့ ဖောင်းပွတဲ့ အသုံးစာရိတ်တွေကို စိစစ်လိုက်ပါပြီ။ ကော်ဖီတခွက် ၁ ဒေါ်လာ ၆၅ ပြားကနေ ၁ ဒေါ်လာတန် ကော်ဖီ ပြောင်းသောက်နေကြပါပြီ။ ရိပ်မိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သူတို့ ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ နည်းပညာကို ဈေးချပေးရတော့မှာကို သဘောပေါက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ကြဖို့သာ ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။ အခု သာဂိရှင်းပြတာက လြူပိန်းတွေအတွက် ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ ရှိတဲ့ဉာဏ် ၂ ပြားဖိုးလောက်နဲ့ ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သာဂိတို့က ဒေ၀ါလီသာဂိဆိုတော့ မာမာပဲလို့ ထင်ကြမယ်။ မာတော့ မမာဘူး။ လန့်လန့်ပဲဗျ။ စီးပွားပျက်ကပ်က ကူးစက်တတ်တယ်။ လန့်ပြီးတော့လည်း လူတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေ နိုင်ငံတွေက ကျဆုံးတတ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားဘာဆိုလား ဘဏ်တခုရှိဖူးတယ်။ အာရှသားတွေရဲ့ ဖောက်သည်ကြီး။ အဲသည်မှာ အဲဒီဘဏ်တွေ အရှုံးပြနေပြီ ဘာညာဆိုပြီး ကောလဟလထွက်လာလိုက်တာ။ အာရှသားတွေက အထူးသဖြင့် ထိတ်လန့် ပြာယာခတ်ပြီး ငွေတွေ ပြန်ထုတ်ကြတော့တာပဲတဲ့။ ဘဏ်ကော၊ ပြည်နယ်ကကော၊ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကကော ၀င်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းရှင်း မရဘူးတဲ့။ ဒီဘဏ်က အာမခံထားတဲ့ဘဏ်၊ ရှုံးရင်တောင်မှ အာမခံကုမ္မဏီက ၀င်ရှင်းမှာ၊ မရှင်းနိုင်ရင် အစိုးရက ရှင်းပေးမှာလို့ ဘယ်လိုပြောပြော အာရှသားတွေက လက်မခံဘဲနဲ့ အဲဒီဘဏ်တွေရှေ့မှာ နေ့နေ့ ညည တန်းစီးပြီး ငွေပြန်ထုတ်လိုက်ကြတာ လမ်းပေါ်မှာ လူတန်းရှည်ကြီးနဲ့ ရဲတောင် ခေါ်ရသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီဘဏ်လည်း ပြုတ်သွားလေရော တဲ့။
အခုအချိန်မှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုတဲ့အသံဟာ တော်လဲသံလို တချို့လူတွေကို လိပ်ပြာလွင့်စေပါတယ်။ အဲဒီရဲ့ အဆိုးဂယက်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့၊ ကာပြန်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေက သတိကြီးစွာနဲ့ စီးပွားရေးအားတိုးဆေးကြီးကို ဖော်ပြီး တိုင်းပြည်ကို တိုက်ဖို့ လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေ၀ါလီသာဂိဆိုတဲ့ ကလောင်နံမယ်ကတော့ မြန်မာပီပီ ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ ကျိန်းကျေအောင် အစီအမံလုပ်ပြီး အမြော်အမြင်နဲ့ ပေးတဲ့နံမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေနဲ့ သူတို့အစိုးရက သာဂိတို့လို ယတြာတွေ၊ ဗေဒင်တွေ၊ ဘိုးတော်တွေ၊ ဘာတွေ ညာတွေ အယုံအကြည်မရှိတာ သိပ်ဆိုးတာပဲ။ အခုလို စီးပွားပျက်နေချိန်မှာ သူတို့တတွေ ဒါမျိုးအစီအမံတွေ မလုပ်ကြတာကလေး တခုပဲ လိုနေတယ်လို့ ဟိုလူကြီး အိုဘားမားကို ပြောအုံးမှနဲ့ တူပါရဲ့။ အော် … အမေရိကန်မှာ ကြက်ဆူပင် စိုက်ဖို့များ လိုနေသလားလို့ မေးကြည့်အုံးမှ …
Thursday, 12 March 2009 17:56 ဧရာဝတီ
ဖြေ။ ။ အဖေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက်ကော အားလုံးလွတ်မြောက်ရေး အတွက်ပါ တတ်နိုင်သလောက် သမီး ကြိုးစားလုပ်နေပါတယ်။ သမီးဘယ်တော့မှ အလျှော့မပေးဘူး။ သမီး ပြောချင်တာကတော့ ဗုဒ္ဓဘုရား ဟောခဲ့သလိုပဲ အရာအားလုံးဟာ တနေရာတည်းမှာတော့ မတည်မြဲနေဘူး။ အားလုံးကတော့ ပြောင်းလဲ သွားရမှာပဲ။ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အချိန်ကျရင် သမီးတို့တွေက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေရမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ခံရတဲ့ သူတွေက ခံရမှာပဲ။ လူတယောက်ဟာ အမြင့်မှာ အမြဲတမ်းတော့ ရပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ သမီးပြောချင်ပါတယ်။ ။﻿